Nepal Pati | Home Page
प्रदेश-६ को नाम कर्णाली र राजधानी सुर्खेत राख्न सहमत
प्रदेश समृद्धिको आधार नै सहकारी हो: मुख्यमन्त्री राई
कांग्रेस संसदीय दलको बैठक ३ बजे सम्मका लागि स्थगित
सोमबार सबै मन्त्रीको शपथ हुने: अध्यक्ष दाहाल
नेपाल–भारत प्रबुद्ध समूहको बैठक बस्दै
बाँदरमुढे घटनाका मृतकलाई सहीद घोषणा
काठमाडौं । सरकारले बाँदरमुढे घटनामा मारिएकाहरुलाई सहिद घोषणा गरेको छ। विहीबार राति सम्पन्न मन्त्रिपरिषद बैठकले बाँदरमुढे घटनाका मृतकलाई सहीद घोषणा गरेको कानूनमन्त्री यज्ञबहादुर थापाले जानकारी दिए। चि...
काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले निलम्बित सहसचिव चूडामणि शर्माविरुद्ध गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन अभियोगमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गर्ने निर्णय गरेको छ । बिहीबारको आयोग बोर्ड बैठकले शर्माविरु...
‘जथाभावी’ नियुक्ति र दूरगामी निर्णय
काठमाडौं । बहिर्गमनका क्रममा रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले धमाधम ‘जथाभावी’ नियुक्ति र दूरगामी निर्णय गर्न थालेको छ । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको ताजा जनादेशपछि कामचलाउ हैसियतमा...
एक कहाली लाग्दो वास्तविकता
हिउँदको माईनस् १० डिग्रीको जाडो, खुल्ला ढोका, चिसो हावाहुरी, भत्किन लागेको साँघुरो गोठमा ४ देखि ६ दिन सम्मको बसाई, हुम्लाका महिलाले महिनावारी भएको बेला जिउनु पर्ने एक कहाली लाग्दो वास्तविकता हो । नयाँ...
वायु प्रदूषण : नेपाल खराब ५ मुलुकको सूचीमा
काठमाडौं । वायु प्रदुषणका हिसाबले नेपाल विश्वमै अग्रस्थानमा रहेको हालै सार्वजनिक अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययनले देखाएको छ । विख्यात येले र कोलम्बिया युनिभर्सिटीले ‘वल्र्ड इकोनोमिक फोरम’ सँगको साझेदारीमा हा...
प्रतिनिधिसभामा पनि ८० प्रतिशत भत्ता माग्दै संसदका कर्मचारी !
काठमाडौं । संविधानसभाको समयावधिमा दिइएको ८० प्रतिशत प्रोत्साहन भत्तालाई नै आगामी संसदमा पनि निरन्तरता दिनुपर्ने भन्दै संसदका कर्मचारीले दबाब सुरु गरेका छन। संविधान निर्माणको काममा खटनुपर्ने भन्दै सभा...
‘प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्ति प्रकरण’मा सिलवालको माग
काठमाडौं । किर्ते कागजातको अनुसन्धानका लागि प्रहरीको खोजी सूचीमा रहेका ललितपुर १ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित पूर्वडीआईजी नवराज सिलवालले ‘प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्ति प्रकरण’ को निष्पक्ष निकायबाट...
चक्रे मिलनलाई सफाइ
काठमाडौं । विशेष अदालतले काठमाडौंका गुन्डा नाइके चक्रे मिलनलाई सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोगबाट सफाइ दिएको छ । विशेष अदालतका सदस्यहरू रत्नबहादुर बागचन्द, चण्डीराज ढकाल र प्रमोदकुमार श्रेष्ठको इजलासले च...
५५ वर्षमै वृद्धभत्ता
काठमाडौं ११ माघ । सरकारको निर्णयले अब कर्णालीका नागरिकले ५५ वर्षमै वृद्धभत्ता पाउनेछन् । पञ्जीकरण विभागका अनुसार सरकारको निर्णयपछि कर्णालीका सबै समुदायका नागरिक, देशभरका दलित समुदायका नागरिक र एकल महि...
ढुंगा-गिट्टी निकासी खोल्न चलखेल
काठमाडौं । ढुंगा, गिट्टी, बालुवा भारत निकासीमा लागेको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्न केही मन्त्रीले चलखेल सुरु गरेका छन्। संघीय मामिला तथा स्थानीय विकासमन्त्री विजयकुमार गच्छदार, अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर ...
कांग्रेस, फोरम र राजपाबीच तालमेल
काठमाडौं । राष्ट्रियसभा चुनावमा कांग्रेस, संघीय समाजवादी फोरम र राष्ट्रिय जनता पार्टीबीच गठबन्धन भएको छ। तीन दलबीच राष्ट्रियसभामा चुनावी एकता गर्ने सर्तमै सरकारले फोरमका रत्नेश्वरलाल कायस्थलाई प्रदेश...
काठमाडौं । मन्त्रीहरूले दिनहुँ मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा ठाडो प्रस्ताव ल्याउँदै स्वीकृत गर्न दबाब दिन थालेपछि मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मी तनावमा पर्न थालेका छन्। बुधबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा भएका अधिका...
जाँदाजाँदै लोकरिझ्याई : अब ६५ वर्षमै वृद्धभत्ता
काठमाडौं । अब ६५ वर्ष उमेर पुगेका वृद्धवृद्धाले सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने भएका छन्। मन्त्रिपरिषद्को बुधबारको बैठकले वृद्धभत्ता पाउने उमेर ७० वर्षबाट घटाएर ६५ वर्षमा झारेपछि यो सुविधा पाउने भएका हुन्...
डेढ सय पूर्वसांसदले बुझाएनन् रातो पासपोर्ट(नामावलीसहित)
काठमाडौं । अघिल्लो संसद् सकिएको १०१ दिन पुग्दा पनि तत्कालीन १५५ सांसदले कूटनीतिक पासपोर्ट अझै फिर्ता गरेका छैनन् । संसद्को कार्यकाल सकिएको एक साताभित्रै त्यस्तो पासपोर्ट फिर्ता गर्नुपर्ने कानुन छ । पू...
फरेन्सिकको ‘डीएनए’ परीक्षणमा गम्भीर प्रश्न
काठमाडौं । डीएनए परीक्षण शतप्रतिशत अकाट्य रहेको वैज्ञानिक प्रमाण मानिए पनि बाबुछोरा बीचको ‘नाता कायम' सम्बन्धी एक मुद्दामा अदालतले विधि विज्ञान प्रयोगशाला (फरेन्सिक ल्याब) को विश्वसनियतामाथि गम्भीर प्...
राष्ट्रियसभा निर्वाचन : दलले टुंग्याए उम्मेदवार
काठमाडौं । राष्ट्रियसभामा राष्ट्रिय जीवनका प्रबुद्ध व्यक्तित्व राष्ट्रियसभा सदस्यका लागि उम्मेदवार बनाउनुपर्ने आशय संविधानमा छ। तर, एमाले, माओवादी र कांग्रेसमा राष्ट्रियसभामा जाने मानिस प्रबुद्ध र रा...
सुमार्गीबारे विस्तृत अनुसन्धान गर्न ५ अधिकृत तोकिए
काठमाडौँ । सम्पत्ति शुद्धीकरणको छानबिनमा परेको अजेयराज सुमार्गीबारे विस्तृत अनुसन्धानको प्रक्रिया अघि बढेको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले ५ अनुसन्धान अधिकृत तोकेर विस्तृत अनुसन्धानको प्रक्...
राष्ट्रियसभा निर्वाचन आज उम्मेदवारी दर्ता
काठमाडौं । राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनका लागि सातवटै प्रदेशमा आज बुधबार उम्मेदवारी दर्ता हुँदै छ । यसका लागि सम्पूर्ण तयारी पूरा भइसकेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । आयोगले राष्ट्रिय सभा निर्वाचन प्रयो...
सशस्त्र प्रहरी बल जनताको मन मस्तिष्कमा : प्रधानमन्त्री, को को भए उत्कृष्ट ?
काठमाडौं । यो खबर आजको राजधानी दैनिकमा छ । सशस्त्र प्रहरी बलले यस वर्षको उत्कृष्ट गण रनिङ अवार्ड सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल दक्षिणकाली गणका गणपति सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक श्यामकाजी कुवँर र उत्कृष्ट सीमा स...
यस्तो हुनेछ संघीय नेपालको प्रधानमन्त्री कार्यालय
काठमाडौं । संघीय नेपालको केन्द्रीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकारको संरचनामाथि लामो समयदेखि छलफल जारी छ । तर, यी तीनै तहबीच समन्वय गर्दै संघीय सरकारकै नेतृत्व गर्ने कार्यकारी प्रमुख अर्थात् प्रधानमन्त्रीक...
भुसाल र भट्टराई किन परेनन् ?
विचारमा पोख्त घनश्याम भुसाल र संगठनमा पोख्त योगेश भट्टराई कार्यदलमा परेनन् । भुस...
सपथका लागि माधव कमरेडले बोलाउनुभयोः लालबाबु
काठमाडौँ । जनसंख्या तथा वातावरणमन्त्री लालबाबु पण्डितले पूर्वजानकारी विनै मन्त्...
कांग्रेसमा देउवा ‘भर्सेज’युवा
नेपाली कांग्रेसमा सभापति शेरबहादुर देउवा विरुद्ध मोर्चाबन्दी सुरु भएको छ । चुनाव...
नवनियुक्त प्रधानमन्त्री केपी ओलीको हारजित र जेलनेल यात्रा
काठमाडौँ । नवनियुक्त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको जन्म २००८ साल फागुन ११ गते त...
सन्दर्भ प्रधानमन्त्री नियुक्तः राष्ट्रपति कार्यालयले गल्ती सच्यायो
काठमाडौँ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बिहीबार एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलाई प्र...
प्रदेश २ मा को–को छन् मन्त्रीको आकांक्षी ?
प्रदेश २ मा बिहीबार सरकार गठन हुने भएको छ । मुख्यमन्त्रीका रूपमा फोरम संसदीय दलक...
प्रधानमन्त्रीज्यू, अब नबोल्ने हो कि !
अत्यन्तै उत्साह, भरोषा र कूतुहलताकोबीच माओवादी केन्द्रको सहयोगमा प्रधानमन्त्रीको...
‘आर्थिक विकास नेपाल र नेपालीको लक्ष्य’
काठमाडौँ । बेलायतको प्रतिनिधिसभाका सदस्य क्रिस डेभिसले आर्थिक विकास नेपाल र नेपा...
एमाले र माओवादीबाट ४ मन्त्रीले सपथ लिँदै (को–को बन्दैछन् मन्त्री)
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले बुधबार मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्दैछन् । ओलीले...
राष्ट्रपतिमाथि कांग्रेसको गम्भीर आरोप
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसले राष्ट्रपतिमाथि गम्भीर आरोप लगाएको छ । शेरबहादुर देउ...